रात्रिको ०८ : ३९
सुदूरपश्चिममा नबिल एसएसई प्रमाणपत्र कार्यक्रमको सुरुवात
काठमाडौँ । नबिल बैंकले यसैवर्षदेखि सञ्चालन गरेको गैरनाफामुलुक कार्यक्रम नबिल स्कुल अफ सोसियल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई) अन्तर्गतको प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुदूरपश्चिममा सुरुवात भएको छ । सुदूरपश्चिमा...
makalukhabar.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डले खेलाडीलाई सम्मान गर्ने
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ खेलकुद विकास बोर्डले ओलम्पिक, एसियन र साफ गेममा सहभागी खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भएको छ । बोर्डले यही असार १९ गते विराटनगरमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै साफ, एसियन र ओलम्प...
पैसाले मात्रै चुनाव जित्ने प्रचलनकाे अन्त्य गर्छाैँ : रवि लामिछाने (भिडिओसहित)
काठमाडाैँ । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ठूला व्यापारी-घरानाबाट चन्दा उठाउने चलनलाई निस्तेज पार्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी दर्ता भएपछि निर्वाचन आयाेग प्राङ्गणमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै...
‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’मा पुनर्विचार हुँदैन : राष्ट्रपति सी
फाइल तस्बिर बेइजिङ । अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा राष्ट्रले ५० वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै तीक्ष्ण आलोचना गरिरहेका बेला राष्ट्रपति...
इलाम । इलाममा सवारी दुर्घटना हुँदा ११ जना यात्रु घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङको थुम्बेदिनबाट झापातर्फ गइरहेको को १ ज ३३२९ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा सबै यात्रु घाइते भएका हुन् । इलाम नगरपालिका–१ मा ...
अजोड इन्स्योरेन्स र ज्यापु समाजबीच बीमासम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स र ज्यापु समाजबीच बीमासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । इस्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जनका बीच उक्त सम्झ...
पार्टी दर्ता भएपछि रविले भने – अब पार्टीका एजेन्डा जनतामाझ लग्छाैँ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आयोगको शुक्रवार बसेको बैठकले दल दर्ताका लागि उक्त पार्टीले दिएको निवेदनलाई स्विकार्दै दलको मान्यता दिएको हो । रवि लामिछानेले अ...
काठमाडाैँ । काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप तीन जनामा हैजा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनका अनुसार यो सङ्ख्यासँगै अहिलेसम्म उपत्यकामा १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ । मन...
काठमाडौँमै बसेर हेरौँ दोलखा !
काठमाडौँ । दोलखा जिल्लाको विविधता झल्काउने खालका तस्बिरहरूको मेला ‘फोटो मेला–२०७९’ काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित पर्यटन बोर्डमा सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमा दोलखाको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थ...
पाठ्यपुस्तक अभाव गराउन भूमिका खेलेकाे भन्दै जनक शिक्षाका प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार
काठमाडाैँ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रका प्रमुख अनिलकुमार झामाथि दुर्व्यवहार भएको छ । उनीमाथि शुक्रबार दिउँसाे दुर्व्यवहार भएकाे हाे । उनीमाथि दुर्व्यवहार भएकाे भक्तपुर प्रहरीका प्रवक्ता राजु पाण्...
makalukhabar.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा सहजरूपमा पाइने कटुससमेत आयात गरेर नेपालीले खाइरहेको पाइएको...
काठमाडाैँ । नेपालमा थप ५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको १ हजार ४ सय ६७ पिसिआर परिक्षणका क्रममा ३५ जना र १ हजार ३ सय ४७ एन्टीजेन परिक्षणका क्रममा १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ...
सानिमा बैंक अब काठमाडौँको नेपालटारमा
काठमाडाैँ । सानिमा बैंक लिमिटेडले शुक्रबार तारकेश्वर नगरपालिका–११ नेपालटारमा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन ब्रान्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रे...
दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्छ : अध्यक्ष थापा
फाइल फाेटाे सुर्खेत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राप्रपा नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिद्वारा आज ...
रविकाे दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिह्न घण्टी नै
काठमाडाैँ । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेकाे दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयाेगले प्रस्तावित पार्टीकाे नाम र चुनाव चिह्नलाई नै मान्यता दिँदै दर्ता गरेकाे हा...
नबिल बैंकका नवनियुक्त सीईओ ढुङ्गानाद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौँ । नबिल बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले शुक्रबार शुक्रबारदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । बैंकको १६ असारमा सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले बैं...
कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा राष्ट्रपतिकाे जाेड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित कार्य...
निर्वाचन आयोग चितवन । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा रहेका राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका अनुसार ...
राष्ट्रियसभाबाट रेलवे विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
फाइल फाेटाे काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठकले रेल्वे विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले दफावार छलफलका लागि विधेय...
प्रकाश दाहालकाे शालिक अनावरण
काठमाडाैँ । नेकपा [माओवादी केन्द्र]का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिवंगत पुत्र साकार दाहाल ‘प्रकाश’ को शालिक अनावरण गरेका छन् । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका ६ स्थित ककनी अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति...
काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्धारामा पुगेर जगन्नाथ रथयात्राको अवलोकन गरेकी छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत सङ्घ (स्कोन नेपाल)ले आयोजना गरेको सो रथयात्रामा सरिक हुँदै रा...
makalukhabar.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
भारतलाई बिजुली बेचेर प्राधिकरणले एक महिनामा कमायो एक अर्ब ७२ करोड
काठमाडाैँ । गरे के हुँदैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपाल आफैँ चरम लोडसेडिङमा थियो । बिजुली खरिद गरेर ल्याउँदासमेत दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । प्राधिकरणभित्र मौलाएको अराजकता नियन्त्रण हुनुको ...
पोखराले भरतपोखरीमा ल्याण्डफिल सार्ने निर्णय गर्‍यो, गाउँले भेला भएर विरोध गरे
पोखरा । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहिलो सर्त छ- हालको पोखराको ल्याण्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने । हाल पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्याण्डफिल साइटलाई ३३ नम्ब...
स्मृतिमा प्रकाश : प्रचण्डले गरे शालिक अनावरण, छाेराहरूले फूल चढाए
काठमाडाैँ । साकार दाहाल ‘प्रकाश’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का छाेरा हुन् । नेपाली राजनीतिमा उनलाई प्रकाश दाहालकै नामले चिनिन्छ । १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धमा प्रत्यक्...
एमालेकाे विराेधका बिच राष्ट्रियसभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक पारित
फाइल फाेटाे काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको बहिष्कारका बिच राष्ट्रियसभा बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न तीनवटा विधेयकलाई पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको...
पोखराले भरतपोखरीमा ल्याण्डफिल सार्ने निर्णय गर्‍याे, गाउँले भेला भएर विरोध गरे
पोखरा । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहिलो शर्त छ, हालको पोखराको ल्याण्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने । हाल पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्याण्डफिल साइटलाई ३३ नम्बर...
makalukhabar.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा जसपा
काठमाडाैँ । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी [जसपा] ले सङ्घीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बाेलाउने तयारी गरेकाे छ । सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्...
makalukhabar.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एमालेको सामाजिक सेवा केन्द्रद्वारा बाढी पीडितलाई राहत वितरण शुरु
विराटनगर । नेकपा एमालेले तीन महिनाअघि गठन गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रले बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्न शुरु गरेको छ । केही दिनदेखि आएको बाढीले मोरङका विभिन्न ठाउँमा घरबारविहीन भएकाहरूलाई आज सामाजि...
राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित तीनवटै विधेयक पारित, एमालेको बहिष्कार
फाइल फाेटाे काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले बजेट आश्रित तीन वटै विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले बजेटसँग जोडिएर आएका आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण तथ...
काठमाडाैँ । अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । परियोजनामा सङ्खुवावासीको हक, अधिकार र लगानी जुटाउने व...
राष्ट्रिय सभा : एमालेले गर्‍याे आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार
काठमाडाैँ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा [एमाले]ले राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अनाधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गरेको भन्दै ...
makalukhabar.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
झापा । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका-५ आयाबारीमा एउटा हात्ती मृत भेटिएको छ । स्थानीयवासीले आज बिहान ५ बजेतिर खेतमा हात्ती मृतावस्थामा फेला पारेका हुन् । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राजकुम...
प्रचण्ड-राजेश हमालबीच भेटवार्ता
काठमाडाैँ । नेकपा [माओवादी केन्द्र] का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महानायक राजेश हमालबीच भेटवार्ता भएकाे छ । प्रचण्डलाई भेट्न राजेश शुक्रबार बिहान खुमलटार नै पुगेका थिए । चलचित्र विकास बोर्ड...
गोरखा अदालतका तहसिलदार घुससहित पक्राउ
फाइल फाेटाे पोखरा । गोरखा जिल्ला अदालतका तहसिलदार रामचन्द्र केसी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । १५ हजार घुस रकम सहित...
makalukhabar.com . १० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जनताकाे उठिबास लगाउँदै वित्तीय संस्था, सरकार मूकदर्शक !
काठमाडाैँ । असार मसान्त आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । असार सकिन लागेसँगै धेरैको भोक र निद्रा हराएको छ । बैंक, फाइनेन्सले कर्जा खाएका ऋणीलाई च्यापेको च्यापै छ । धितो राखेर कर्जा लिनेलाई वित्तीय संस्था...
वायुसेवा निगम ६५ वर्षमा : ऋण दायित्व करिब ४७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले ६५ वर्षे यात्रा शुरु गरेको छ । सन् १९५८ जुलाई १ मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट सेवा प्रारम...
प्रदेशमा पर्यटन कार्यदल गठन, ब्राण्ड नाम/चिन्ह तयार गर्ने
विराटनगर । प्रदेश सरकार पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय प्रदेश नं. १ले पर्यटन ब्राण्ड नाम/चिन्ह तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायी भविशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको ह...
पोखरा । स्याङजाको पुतली बजार नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । पुतलीबजारभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने निर्णय पुतलीबजारका नव निर्वाचि...